MINISITERAN’NY FITSARANA : Manameloka tanteraka ny tenin’ny kandida Fanirisoa Ernaivo
Taorian’ny kabarin’i Fanirisoa Ernaivo nandritra ny fihaonany tamin’ny vahoaka vitsy dia vitsy ny talata teo dia namoaka fanambaràna ny minisiteran’ny Fitsarana, nanambara fa miombona alahelo amin’ny fianakaviana, namana sy mpiara-miasa amin’ireo polisy telo lahy niharan’ny fitsaram-bahoaka tany Fenoarivo Atsinanana ka namoy ny ainy teo am-panatanterahana ny asany. 2 novembre 2018
Manameloka tanteraka ny fanambaràna fihantsiana sy fanozonana mpitandro filaminana nataon’io kandida io tamin’ny mpitandro filaminana, izay sady voararan’ny lalàna no manitsakitsaka ny sata maha mpitsara sy ny lalam-pifidianana ary manamavo ny soatoavina maha Malagasy sy repoblikanina. Mampahatsiahy hatrany ny Fitsarana fa tsy misy ambonin’ny lalàna na iza na iza, ka izay minia mihoa-pefy dia handraisana fepetra, ho fanajana sy fitandroana ny filaminana eto Madagasikara. Manamafy koa ny maha zava-dehibe ny fiaraha-miasa amin’ny mpitandro filaminana amin’ny fanatanterahana ny asam-pitsarana.
Tsiahivina moa fa nilaza ity mpitsara, izay kandida hifaninana hofidiana ho Filoham-pirenena ity fa “na baiko aza no azon’ireo mpitandro filaminana dia tokony hisaina izy ireo amin’ny fanatanterahana izany baiko izany”. Fandatsana no nahazo ireo polisy telolahy maty, ary mbola nampiany hoe “na ny fatinareo halevina aza tsy hisy”, taorian’ny fanozonany an’ireo mpitandro filaminana mba ho azon’ny fitsaram-bahoaka sy ho faty. Ny sekretera jeneralin’ny minisitera no nanao sonia ny fanambaràna. Miakatra ny maripana amin’ity fifidianana filoham-pirenena ho avy ity. Andro sisa isaina dia higadona ny 7 novambra.
Ity fifidianana ity no nahitana karazan-javatra tsy nampoizina isan-karazany, toy ny kandida tsy manao fampielezan-kevitra fa miray hina indray hanafoanana ny fifidianana. Misy ny fifandonana eo amin’ny samy mpanohana, manjaka ny lainga sy ny fanosoram-potaka. Tsy fantatra intsony ny vaovao marina sy ny tsy marina. Mbola mihatra hatrany koa ny antsonjay atao amin’ny kandida sasany. Ny irariana dia mba ho samy tonga saina fa samy Malagasy, samy mbola ho eto ary Madagasikara dia itambarana.